CadExplorer, khangela ukhangele iifayile ze-CAD njengakwiGoogle -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/CadExplorer, khangela uphinde ufake iifayile ze-CAD njengeGoogle
Ekuboneni kokuqala kujongeka ngathi yiTunes yeAutoCAD. Akunjalo, kodwa kubonakala ngathi sisixhobo esakhiwe ngemibono yokuyila kunye nokusebenza phantse njengeGoogle.
CadExplorer yisicelo esenza ulawulo lweedatha ngeefayile ze-AutoCAD (dwg) kunye ne-Microstation (dgn). yobizo, inkampani ephuhlisiwe inezinye iiprogram, kodwa makhe sibone oko kukubambisayo:
Yinjini yokukhangela injini
Sisebenzise ukukhangela kwe-Google kwi-Gmail, asiyazi apho i-imeyile kodwa sikhumbula amagama ambalwa, sibhala kwaye sele sinelihlu lwee-imeyile ezinokuba yilokho esikufunayo.
Ewe, kule logic yokulula, kunye neCadExplorer unokwenza umboniso weetabern kunye nefom ye-carrousel yeefayile, ngombono ngendlela ye-thumbnail. Isebenza kunye neefayile ze-dwg kunye ne-dgn, ukulungiselela olu hlaziyo ndibeka phakathi kwabazali amagama alinganayo abasebenzisi beMicrostation:
Iyunithi apho zigcinwe khona
Zingaphi iindlela (imizekelo)
Mangaphi amanqaku (Amanqanaba)
Zingaphi iimpawu iimephu nganye?
Unokwazi nokuba yeyiphi ifomathi ye-dwg / dgn egcinwe kuyo kwaye ngowuphi umhla eguqulweyo Kukhulu, emva koko unokuhlela ngokwezihloko zekholamu.
Ngaphandle komboniso, kunokukhangelo oluthile kwifayile enye okanye ezingaphezulu ezihlangabezana nemeko ethile, umzekelo ezo zefomathi yenguqulelo ka-2007; iifayile ezinezinto ezininzi ngaphakathi, njengokuqinisekisa ukuba zeziphi ezinobunzima obungaphezulu; ezo zaguqulwa phakathi kuka-Matshi 11 ukuya kuMatshi 25, 2007, njl.
Ngaphandle kwalokhu, uCadExplorer angakhangela ngaphakathi kwiifayile zezinto ezinjenge:
Iibhloko (iiseli), ngokungathi ufuna ukwazi ukuba zingaphi iifenitshala zefenisha ezibizwa ngokuthi "ibhedi" zikho kwiifayile ze-35.
Umbhalo, njengolu hlobo lokufuna ukufumana ikhowudi ethile ye-cadastral.
IiJometri ezifana nezijikelezo, imigca okanye imida (imilo) kunye nezihlunu ezifana nohlobo lomgca, ubunqamle, umbala, umgca (kwinqanaba), njl
Uphando alugcini nje kuphela kwigama, kodwa nangenkcazo, iimpawu okanye iilebula ezinjengeebhloko, iingxelo zangaphandle kunye nezakhiwo (imizekelo).
Emva kokuba into efunyenwe nentshisekelo, inokwenzeka ukuyifumana into kwifom yokujonga kuqala. Emva koko unako ukuvula ifayile, kwi-eto, ye-AutoCAD okanye kwi-Microstation.
Ukukhangela okanye ukuboniswa kwethala kungenziwa njengengxelo, ithunyelwe kwi-Excel okanye igcinwe njenge-smartview, uhlobo lokukhangela olugcinwe kwisicelo sokukhangela omnye.
Makhe sicinge ukuba iinkcukacha zithi ii-axes zihamba kwinqanaba elibizwa ngokuba yi "axes", ngombala obomvu kunye nobukhulu be-0.001 kwaye ukubhala iilebheli kufuneka kube yi-Arial enobukhulu be-1.25. Sineprojekthi apho sahlule umsebenzi kwiifayile ezingama-75, ezinye zazo zinelo nqanaba, ezinye azinjalo, izicatshulwa zinokubakho kwezo meko kodwa asazi kwaye mhlawumbi uninzi lufuna ukuqinisekiswa kunye / okanye uhlengahlengiso olo tshintsho.
I-CadExplorer yenzelwe loo nto, isenza utshintsho olukhulu kwiifayile ze-CAD. Kulungile ukwenza ulawulo lomgangatho, ngokukhetha kuphela umaleko obizwa ngokuba "zizembe", unokufaka utshintsho kuzo zonke iifayile ngaxeshanye.
Unokwenza ukukhangela okubhaliweyo kwaye ubeke endaweni okanye concatenation esekwe kwimitya okanye amabinzana aqhelekileyo. Isisombululo esikhulu ngokwenene ukusombulula iingxaki zokuphula imigangatho (Imigangatho yeCAD)
Isixhobo esikhulu, ngokuqinisekileyo. Ngaphandle kwembonakalo entle, ukusebenza kweCadExplorer kujongeka kuyinto efanelekileyo. Ekuqaleni ndikhumbula ukuyibona kwiifayile zeMicrostation, kodwa ngoku isebenza ngokufanayo kwiifayile ze-AutoCAD ngaphandle kwenguqulo yazo. Inguqulelo yamvanje isebenza Windows 7 ibandakanywe kwiibhithi ezingama-64.
Ukufumana ulwazi oluninzi ungaqhagamshelana newebhusayithi yobizookanye u landele nge Facebook kuba ngamaxesha onke benza imiboniso ye-intanethi.